Los Angeles မှာထိပ်တန်း Entertainment ကပြတိုက်
LA ကအတွက် Entertainment ကပြတိုက်
Los Angeles မှာရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်တေးဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းအာရုံစိုက်ကြောင်းပြတိုက်
ဟောလိဝုဒ် ရှည်လျားကမ္ဘာ၏ဖျော်ဖြေရေးမြို့တော်အဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီး Los Angeles မြို့မြို့များကိုသမိုင်းနှင့်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်တေးဂီတအတွက်လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍမှကိုးကွယ်ပေးဆောင်များစွာကိုပြတိုက်နှင့်အထင်ကရအဆောက်အရှိပါတယ်။ ဤတွင်သမိုင်းနှင့်နည်းပညာများကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအားလုံးအနေဖြင့်ကျားကန်, ဝတ်စုံ, တူရိယာများနှင့်အပိုငျးအကြည့်အရှုသွားထိပ်တန်းပြတိုက်ဖြစ်ကြသည်။
ဟောလိဝုဒ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာဟောလိဝုဒ်ပြတိုက်သိုးသငယ်၏တိတ်ဆိတ်နေကြီးမြတ်ရုပ်ရှင်ဝတ်စုံ၏စုဆောင်းခြင်း, ကျားကန်တစ်ခုကျယ်ပြန့် Marilyn Monroe ပြပွဲအပါအဝင်အလှဆင်ခြင်းနှင့်အမှတ်တရ ထား. ဧလိရှဗက်တေလာ, မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နှင့်များစွာသောအခြားသူများအားအခွန်ကိုနှင့် Hannibal Lechter ရဲ့ဆဲလ်ရှိပါတယ် ။ အဆိုပါပြတိုက်ဟောင်း Max Factor အဆောက်အအုံအတွက်ဖြစ်ပြီး, Max Factor ကသူတို့ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်မင်းသမီး၏ကွဲပြားခြားနားသောအသားအရေနှင့်ဆံကေသာအဆင်းအရောင်ဖြည့်စွတ်ရန်အလှဆင်ခဲ့အဖြစ်ပထမထပ်ကတော့လုပ်-up, အခန်းပေါင်းဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Wikimedia Commons ကနေတဆင့် Minnaert,
ဟောလိဝုဒ်အမွေအနှစ်ပြတိုက် Cecil B. DeMille နှင့်ယေရှဲသည်အယ်လ် Lasky များအတွက်ဟောလိဝုဒ်အတွင်းပထမဆုံးအသံတိတ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုဖြစ်လာခဲ့သည်သောမူရင်း Stern ပာမိသားစုကျီအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ စုဆောင်းခြင်း Archive အသံတိတ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု, ကျားကန်, သမိုင်းဝင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားရုပ်ရှင်-related အမှတ်တရအနေဖြင့်ဓာတ်ပုံများကိုအဖြစ်ဟောင်းကိုဟောလိဝုဒ်၏ဓာတ်ပုံသမိုင်းပါဝင်သည်။
မှာဂရမ်မီပြတိုက် LA ကတိုက်ရိုက် မှတ်တမ်းတင်ဂီတ၏သမိုင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းမှတ်တမ်းတင်အနုပညာရှင်နှင့်အုပ်စုများအပေါ်ကမှတ်တမ်းတင်ဖို့အသုံးပြုနည်းပညာများအဖြစ်အထူးပြပွဲတင်ပြသွားပါသည်။ သငျသညျကိုလည်းစူးစမ်းနိုင်ပါတယ် Fame ၏ဂရမ်မီလမ်းလျှောက် ထိပ်လေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်, တစ်ခုလုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှတဆင့်များနှင့်ပတ်ပတ်လည် circles သော။
အမေရိကန်အနောက်၏ Autry ပြတိုက်
Griffith ကပန်းခြံအတွင်းအမေရိကန်အနောက်၏ Autry ပြတိုက်, ယေဘုယျအနောက်တိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အနုပညာအပြင်, အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်အမျိုးအစားများ၏သမိုင်းနှင့်ကျော်ကြားသောရုပ်ရှင် Cowboys အပေါ်အထူးအာရုံစိုက်ထားပါတယ်။
မီဒီယာများအတွက် Paley ရေးစင်တာ
Beverly Hills မှာအတွင်းမီဒီယာများအတွက် Paley စင်တာ (ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုများယခင်ကပြတိုက်) 150,000 ကျော်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုရှိုးများစုစည်းထားရှိပါတယ်။ အဆိုပါပြတိုက်တီဗီရှိုးကနေအပိုင်းပိုင်း, အမှတ်တရ, ရုပ်ရှင်ဆဲလ်များနှင့်အခြားအနုပညာလက်ရာများ ထား. ကျားကန်ပါဝင်သည်။
Madame Tussauds ဟောလိဝုဒ်။ Kayte Deioma
Madame Tussauds ဖယောင်းပြတိုက်ပစ္စုပ္ပန်ဖို့အစောပိုင်းရုပ်ရှင်နဲ့ TV လက်ထက် မှစ. နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အခြားလူသိများတဲ့ကိန်းဂဏန်းများ၏ဖယောင်းကိန်းဂဏန်းများတွေ့ရမယ်။ အဲဒီမှာဖတ်ဖို့သမိုင်းတွေအများကြီးမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ချာလီ Chaplin, Marlene Dietrich နှင့်ကျော်ကြားသောသရုပ်ဆောင်များကိုတစ်ရာစုနှင့်အတူအနီးကပ်အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတက်ရနိုင်သည်။
အဆိုပါဟောလိဝုဒ်ဖယောင်းရုပ်ပြတိုက်မှာလူ့အဖွဲ့အစည်းတခုပြကွက်။ Kayte Deioma,
Madame Tussauds လိုပဲဟောလိဝုဒ်ဖယောင်းရုပ်ပြတိုက်ကျော်ကြားဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ၏ဖယောင်းကိန်းဂဏန်းများဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ်ဖယောင်းရုပ်ပြတိုက်သေးငယ်တာအဟောင်းတွေဖြစ်တယ်, သူတို့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းအများစုမှိုမပါဘဲနှင့်ကွန်ပျူတာ-ကူညီမော်ဒယ်များမတိုင်မီဖန်တီးခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့တူသလောက်မရှာကြဘူး။ ဧည့်သည်ကိုသင် Tussauds မှာတတ်နိုင်သမျှအဖြစ်ဓာတ်ပုံကိုအခွင့်အလမ်းများအတွက်အဖြစ်အနီးကပ်မရနိုင်အောင်အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများ, ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗွီရှိုးကနေမြင်ကွင်းတစ်ခုထပ်ဖွကြောင်း Tableau သတ်မှတ်နေကြသည်။
ဟောလိဝုဒ် Bowl ပြတိုက်
အဆိုပါဟောလိဝုဒ် Bowl ပြတိုက်၏ Courtesy
မှာအဆိုပါပြတိုက် ဟောလိဝုဒ် Bowl အင်တုံ, LA ကတီးဝိုင်းနှင့်အခြားဂီတ-related ပြပွဲ၏သမိုင်းတင်ဆက်ပေးတယ်။
ဒီဇိုင်းဖက်ရှင် Institute နှငျ့ကုန်သွယ်နှစ်ပတ်လည်အော်စကာသာ costume ပြကွက်
FIDM သာ costume ပြကွက်။ ဗင်းဆင့် Sandoval / Contributor / Getty Images
အတွက်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအင်စတီကျုနှင့်ကုန်သွယ် (FIDM) ပြခန်း Downtown LA က ကိုအကောင်းဆုံးဝတ်စုံအမျိုးအစားအတွက်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူအပေါင်းတို့ကိုရုပ်ရှင်ကနေဝတ်စုံ featuring အနေနဲ့နှစ်စဉ်အော်စကာသာ costume ပြကွက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါပြပွဲအော်စကာဆုအတွက်န်းကျင်တိုင်းဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လပြေး။ ထိုအချိန်ကာလ၏ကျန်, အပြခန်းဖက်ရှင်ဝတ်စုံနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအပေါ်သက်သေခံပစ္စည်းများကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါ Paramount စတူဒီယိုခရီးစဉ်အပေါ်ကျားကန်အခန်းထဲမှာ။ Kayte Deioma
ရုပ်ရှင်နဲ့ TV စတူဒီယိုအများစုဟာသူတို့ရဲ့စတူဒီယိုခရီးစဉ်အပေါ်, ဒါမှမဟုတ် Universal Studios ကသာသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်ကြောင်းပြတိုက်, ကျားကန်အိမ်များနှင့် archive ကိုပြပွဲ, ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံဝင်ပေါက်နှင့်အတူထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
တစ်နေ့သို့မဟုတ်တစ် Weekend များအတွက်စန်တာမော်နီကာ
LA ကအတွက်ဟယ်လို Theme ဥယျာဉ်ပွဲများ
ဇူလိုင်လအတွင်းက Los Angeles
ထိပ်တန်း Downtown Long က Beach စားသောက်ဆိုင်များ
NYC အတွက်အလုပ်လက်မဲ့များအတွက် Apply လုပ်နည်း
Tacoma အတွက်ကျဉ်းမြောင်းသောတံတားရဲ့တစ်ဖက်မှာ Walking
အိန္ဒိယတွင် 11 အကောင်းဆုံးခရီးသွားခရီးဆုံးများအာလုံး
အဆိုပါ Orlando တွင်ဧရိယာများတွင်ရပ်ရွာကောလိပ်များ
2018 ၏9အကောင်းဆုံးမုရတုသဲသောင်ပြင်ဟိုတယ်
သင့်ရဲ့ Next ကိုကံကြမ္မာအဘို့အအိုင်ယာလန်ကိုရွေးချယ်ပါမှထိပ်တန်း 10 အကြောင်းရင်းများ
2018 ၏ 10 အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေး Resorts